Fanadihadiana momba ny fanadihadiana nataon'ny mpanjifa | Martech Zone
Ny fandrefesana dia fomba fitsikerana ny fakana ny mombamomba anao momba ny vinavinanao sy ny mpanjifanao, nefa izy ireo koa dia mety ho fitaovana tsy ampiasaina amin'ny fomba ratsy ary manome data izay mitarika ny orinasanao mankany amin'ny làlana tsy izy. Ohatra tsotra, raha raharaham-barotra aho ka nanontany hoe ahoana no ahafahako manatsara ny tranokalako dia efa mametraka fanantenana amin'ny olona manao fanadihadiana aho fa misy zavatra tsy maintsy atao hanatsarana ny tranokala… raha ny tena izy ilay tranonkala mety hahavita tsara.
Tsy lazaina intsony ny zava-misy fa toa samy manandrana manodikodina ny mpanjifa sy ny orinasa ny olon-drehetra amin'izao fotoana izao hamolavolana programa manasaraka sy mikendry izany amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny marina. Ny valin'ny fangatahana dia misy fiatraikany amin'ny indostria… ambany ny faharetana ireo mpandray fanadihadiana.
Ireo namaly ireo fanadihadiana natao vao tsy ela akory izay (tsy maintsy misy vazivazy tsara any any ho any) dia nilaza fa lava loatra, manokana loatra ary tsy mahasalama ny fanadihadiana. Plus orinasa dia mangataka amin'ny mpanjifa hameno azy ireo mihoatra ny taloha. Avy amin'i Zendesk's Infographic: havizanana amin'ny valiny
Inona no tokony hataon'ny mpivarotra? Alao ny fitondran-tena fa aza mangataka vaovao raha azo atao. Ahenao ny fahita matetika amin'ny fanadihadiana ary ahena ny isan'ny fanontaniana. Andramo ny mamorona fanadihadiana izay mandatsaka fanontaniana isaky ny mandeha ianao ary mampiasa valiny tsotra fa tsy mangataka fampahalalana misimisy.
Tags: fanadihadiana an'ny mpanjifaFeedbackfitantanana tamberinafanadihadianafanadihadiana
Mitsivalana: Sary manan-tsaina sy mifampitohy
12 Jan 2013 amin'ny 12:23 PM
Tena zava-dehibe ny fanehoan-kevitry ny mpampiasa, saingy mihasarotra ny mahazo azy. Aleoko kokoa mianatra momba ny zava-bitan'ny tranokala amin'ny alàlan'ny fanadihadiana fa tsy amin'ny alàlan'ny varotra, na tsy fisian'izany.
14 Jan 2013 amin'ny 9:37 PM
Diniho izay ataon'ny olona TENY - fa tsy ny zavatra heveriny fa ataony rehefa manadihady azy ireo ianao.